MD Farmaajo oo soo saaray wareegto ka dhana Saadaq John . – Xogmaal.com
MD Farmaajo oo soo saaray wareegto ka dhana Saadaq John .
By MN	 Last updated Apr 13, 2021
Maxamed Farmaajo ayaa sidoo kale si waafaqsan sharciga ciidamadda qalabka waxaa uu ka xayuubiyey Saadaq Cumar, waxii xaquuq ah uu lahaa.
Nuqul kamid ah xeerkan ayaa la soo gaarsiiyey Wakaaladda Wararka ee SONNA.
Saadaq Joon ayaa shalay ku dhawaaqay go’aan ka dhan madaxweyne Farmaajo isagoo ku amray inuu dib ugu laabto Teendhada Afisiyooni.
Midowga yurub oo ka horyimid Mudo kororsiga DFS.
Askari ka tirsan NISA oo caawa lagu dilay Muqdisho